Uninzi lwabasetyhini bazama ukudala ukulungiswa okufanayo kwimihla ngemihla, njengeemvumi ezidumileyo okanye izithandabuzo, kodwa kungekhona kuwo wonke umntu. Oku akuthethi ukuba abafazi abaqhelekileyo babi kakhulu, kubalulekile ukwazi iimfihlelo zobugcisa ezenziwe ngabaculi. Ukusebenzisa amava abo, ukuba bangakhange babukeke ngakumbi kunokuba nayiphi na intombazana ekhuselekileyo, kulula. Apha unako ukunikela umgangatho wezonyamatho - iingcali zixabisa amaxesha amaninzi kunokuba abaninzi besetyhini basebenzise. Kodwa nangona umgangatho awubalulekanga njengoko ubuchule obuchanekileyo bokusebenzisa iipende.
Awuzange uqaphele ukuba uninzi lwabadlali, nangona bengabonakali ngopende, kodwa ngexesha elifanayo ubuso babo bukhanye ngobuhle obungokwemvelo? Yenza umlomo wakho ulungele kakuhle, ukhanyise, utyumle, kodwa ungokoqobo, unako.
Okokuqala, thabatha ipensela ehambelana ngokupheleleyo nefuthe lesikhumba sakho kwaye ucacise umlomo womlomo. Ukuba umlomo unqabile, unako ukuhamba ngaphaya komda wabo wendalo. Gubungela indawo eseleyo kunye ne-cream ephuculweyo kuqala, ngoko, xa lomekile, nge-lip yolwazi. Ngaloo ndlela, ufumana imilomo ekhangelekile yemvelo, kodwa ibhetele kuneleyo owayezibona kwisibuko.
Ukuqinisekisa ukuba i-lipstick igcinwe emlonyeni ixesha elide kunokwenzeka, kwaye akudingeki ukuba ulungise ukuzenzela rhoqo ngoku, kukho ezinye iimfihlelo ezikhohlisayo. Okokuqala, gxotha umlomo wakho ngekhamera yamehlo rhoqo. Xa i-krimu ixakile, susa i-remnants uze uyigubungele umlomo kunye nesiseko sesiseko. Ngaphezulu kwayo, sebenzisa umlomo, kodwa qiniseka ukuba ususe ngaphezu kwe-napkin.
Abantu bambalwa kakhulu banelisekile ngeempumlo zabo. Abaninzi banqwenela ukutshintshana kuyo nayiphi na enye, uqiniseke ukuba neengcambu zangaphandle aziyi kubukeka zibi kakhulu. Kodwa ukusebenza kuxazululwa ngamancinci, kwaye umntu ngamnye unokulungisa utshintsho lwempumlo.
Ukuba ucinga ukuba impumlo yakho ibanzi kakhulu, faka ukhilimu ocoliweyo kumaphiko ekhampumlo lakho elimnyama kunaloo oyisebenzisayo ngeetoni ezi-2. Ukuba iimpumlo zakho zibonakala zide, sebenzisa isiseko esimnyama kwisipoti.
Ungasebenzisi i powder powdered with particle reflective kule mimandla oye wafaka isiseko esimnyama.
Ukuze wenze i-eyelashes ibe mninzi, khetha umthunzi wezithunzi ezithandeka kakuhle amehlo akho, ulusu, umbala weenwele kunye neengubo eziza kubakho. Thatha ipensela yakho eqhelekileyo kwaye uholele kunye nomgca wokukhula kwee-eyelashes, ngokungathi udweba isikhala phakathi kwabo. Emva koko, kunye nomgca wokukhula kwe-eyelash, yenza izithunzi, sebenzisa i-mascara.
Ukuba ufuna ukuvula amehlo akho evulekileyo, sebenzisa umgca wezithunzi ezikhanyayo kwiinkalo zangaphakathi zamehlo nangaphantsi kweenki.
Ukuba ungathanda ukunciphisa ubungakanani bamehlo akho, sebenzisa izithunzi ezimnyama kwi-ijwabu leso.
Ukuze ulusu lukhanye, kufuneka ulungelelanise kakuhle. Ukwenza oku, uzakufuna i-makeup base for tone lighter kunesikhumba sakho, ke isiseko, esifanele ithoni kunye ne powder kunye neengqungquthela ezibonisa. Akufanele ibe yimpuphu kunye neentlobo ezinkulu. Ungayisebenzisi kwinqanaba le-T, ngaphandle koko ulusu luya kubonakala lukhuni.
Ukuze uzenzele i-cheekbones evelele, njengabo bonke abadlali abathandwayo kunye nemifanekiso, akudingeki ukuba ujobe i-silicone. Kwanele ukusebenzisa isicelo ngokuchanekileyo. Ukwenza oku, sebenzisa ukugqithisa phezu kwee-cheekbones phantsi komthunzi omnyama, kwaye kwithuba elingaphezulu kwazo-umthunzi okhanya. Oku kwahlukileyo kuya kunceda ukudala ukukhohlakala kweesitekisi eziphezulu kwaye utshintshe umlo wobuso.
Ukusebenzisa ezi mfihlelo, unokutshintsha indlela ohlala uphupha ngayo ngaphandle koncedo lwagqirha okanye oogqirha bokuzenzela.
Izixhobo zokwenza emva kweminyaka engama-40
Izityalo zePinapple zangaphakathi
Izifo ze-metabolism: ukukhuluphala
Biography kaCeline Dion
Ukuxothwa kwabasebenzi kwiinkathazo
Ungadla njani kwiqela xa udla ukutya
Umhlolokazi waseDmitry Marianov wayefuna ukumthabatha kwiklinikhi yezembali ngosuku ngaphambi kokuhlaselwa
Iminwe eqhelekileyo: yintoni oyenzayo
Inkukhu yenkukhu kwi-plum marinade
Ukufudumeza kwengozi okanye i-hypothermia kwintsana
Indlela yokwenza i-sushi